ဒဿန ခရီးစဉ်: တောင်ဖီလာနှင့် ရွှေဥမင်... အစားမှားသော ကင်းဝန်...
တောင်ဖီလာနှင့် ရွှေဥမင်... အစားမှားသော ကင်းဝန်...
တောင်ဖီလာနှင့် ရွှေဥမင်... အစားမှားသော ကင်းဝန်... (လောကကြေးမုံ-လေးမြိုင်)
12/18/2011 09:22:00 AM
CBox မှ ရှေးဟောင်းမှတ်တမ်းများ…၄
lknt: သိလိုသူ နဲ့ နားလည်သူ ရေ... အမေးအဖြေ လေးတွေ ကောင်းတယ်... လောကကြီးကို နှောင်ဖွဲ့နေတာ သူတို့ မဟုတ်ပါဘူး... နန္ဒီလေးပါ... သည်လိုရေးတော့ မသိသူတွေက အွန်လိုင်းမှာ ဘုန်းကြီး အ၀ှါထားတယ် ထင်နေဦးမယ်... နန္ဒီဆိုတာ=ရာဂ... ဒါကဘုရားဟော... နန္ဒီဆိုတဲ့ တဏှာ ရာဂကြောင့် ခန္ဓာတွေ ရရှိနေကြတယ်... ခန္ဓာမှန်သမျှ ဖြစ်ပြီးပျက်ကြရတယ်... ရေရှည် တည်တံ့နေတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး... အရာရာဟာ ခဏတာဘဲလေ... တခဏ ပြီးတော့လည်း ပျက်သွားပြန်ရော... ခဏတာ တည်တံ့နေတဲ့အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ခံစံကြရတာကို လောကဓံလို့ ခေါ်ပါတယ်... သူလာလာ မလာလာ ကိုယ်ကစောင့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး... သူကတော့ လာကိုလာမှာပါလေ... လာတဲ့အခါ တရားရှိသူများသာ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်... ဒါကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တရားနဲ့နေကြရမယ်...
စီဘောက်စ် ကြွလာ ဆွေသဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ... ( ar အပါအ၀င်ပေါ့... သူက မြန်မာပြည်ကနေ လူစည်အောင် လုပ်ပေးနေရတာ... သူ့ကုန်ကျစားရိတ်က နည်းမှာ မဟုတ်ဘူး... ကျေးဇူးပါဘဲ... ) အားလုံးစိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ...
15 Jun 10, 17:45
နားလည်သူ: သိလိုသူရေ. ကောင်းတဲ့ဖက်က ကြည့်ရင် ဆရာတော် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ခဏဖြတ်ထားတာဖြစ်လို့. ကျေးဇူးတင်စရာပါ။ စေတနာဆိုတာ ကြည့်တတ်ရင် မြင်တတ်ပါတယ်။ စီဘောက်မှာ အရည်မရ အဖတ်မရ ပေါက်တတ်ကရတွေ လာရေးတဲ့ ar ရေ.. စိတ်ချမ်းသာပါစေကွယ်. စားဝင်အိပ်ပျော်ပါစေ. ကံတူအကျိုးပေး မခံရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ 15 Jun 10, 06:17
သိလိုသူ: အမေရိကမှာ ဘုန်းကြီး တပါးကို ကြိုးကိုင်ချုပ်ချယ် ချယ်လှယ် တတ်ပါသလား။ ဘုန်းဘုန်းကို အင်တာနက် ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာ တကယ်ပါလား။ 14 Jun 10, 22:44
flowerpoem: ဘုန်း၂ တပည့်တော် စာလာဖတ်ပါတယ် ဘုရား ဘုန်း၂ မျှတပါရဲ့လား ဦးချကန်တော့ပါတယ်.. lknt: မျှတပါတယ် ဒကာမကြီး flowerpoem ရေ... မိသားစု စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ... 14 Jun 10, 19:29
ooo: :D 12 Jun 10, 07:27 ကောင်းမြတ်ဇော်: ဘုန်းဘုန်း ကျန်းမာပါစေ ဘုရား ......... တပည့်တော်လည်း ကျောင်းပိတ်ခါနီး စာတမ်းတွေ ၊ ပရောဂျက်တွေ ၊ အလုပ်တွေနဲ့ လုံးချာလည်လိုက်ပြီး မရောက်ဖြစ်ပါဘုရား ။ ကျေးဇူးကြီးမား မြတ်ဘုရား သာသနာတော်ကို ဘုန်းဘုန်းတို့ ကဲ့သို့သော သာသနာပြုဆရာတော်များ ဆက်လက်စောင့်ရှောက် နိုင်ပါစေ အရှင်ဘုရား ။
lknt: ဒကာလေး ကောင်းမြတ်ဇော် ရေ... ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါစေ... ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်သွားပါ့မယ်... ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး မျှတပါစေ... 12 Jun 10, 03:01 အောင်ဦင်္း: ဘုန်းဘုန်း ကျန်းမာပါစေ ဘုရား.. တပည့်တော် ရတဲ့အချိန်လေးမှာ လာရောက်ခဲ့ပါတယ် ဘုရား။ ဘုန်းကံကြီးမာ မြတ်ဘုရား သာသနာကို ဆက်လက် စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ အရှင်ဘုရား lknt: ကောင်းပါပြီ ဒကာလေး အောင်ဦး ရေ... အလုပ်တာဝန် အမျိုးမျိုးကြားက ဘာသာ သာသနာကို ဘုန်းကြီးတွေအစား ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့အတွက် သာဓုခေါ်ပါတယ်... တရားနဲ့နေရင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမတွေ ဖြန့်ဝေခြင်း သည်အလုပ်နဲ့ပဲ ဒီဘ၀ ကုန်ဆုံးစေတော့မယ် ဒကာလေးရေ... မိသားစု စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ...9Jun 10, 08:33 kantaya:: lknt: ခေါ် ကိုတော် ar ပြေိာတာမှန်တလာ၊။? lknt: ar ပြောတာတွေ နားမလည်ဘူးလေ သည်တော့ ဘာမှ ဖြေစရာ မရှိပါဘူး... သူတော်တော် မတော်တော် ကိုယ်ကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတွေ သိလိုရင်တော့ မေးနိုင်ပါတယ်... ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးသွားပါ့မယ်... ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး မျှတကြပါစေ... 8 Jun 10, 03:49 ဝေသရိန်: ဘယ်လို ဖွင့်ရမှာလဲ ဘုရား မဖွင့်တက်လို့ lknt: ဒကာလေး ဝေသူရိန် ရေ... ဘာကိုဖွင့်ချင်တာလည်း မသိဘူးလေ ပြောပါ... စိတ်ချမ်းသာပါစေ...7Jun 10, 13:55 lknt: အလည်လာသွားပါတယ်... အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ...6Jun 10, 09:40 ar: သစ္စာ ဘယ်လိုလဲ ပြော်ပါဦး သိတလောက် တက်တလောက် ဟဲဟဲ6Jun 10, 09:33 ar: messagehttp://cbox.ws/smilies/3/grin.gif4Jun 10, 10:12 kantaya:3Jun 10, 08:41 တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ တပည့်တော် အလည်လာသွားပါတယ်.. အရှင်ဘုရား နေကောင်း ကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ lknt: ငြိမ်းချမ်းပါစေ တပည့်တော် ရေ... lknt: အောက်က မေးဖြေကြသူများ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ... ဒုက္ခဆင်းရဲကင်းဝေးကြပါစေ...2Jun 10, 09:52 ar: ၅၅၀ ဇာတ်တောင်္က မဟာယန ခေါ်အရည်ကြီးစာပေ ဟုပ်လာဖြေပါ ဘယ်အချိန်က ခတ်စာခဲတယ်ဆိုးတာ မဖြေနိုင်ရင်ဆရာကြီးမလုပ်နဲ ရန်တွေတာမဟုပ်ဘူ ဘုန်းကြီးတွေကိုမေဘူတယ် မင်လူလာဘုန်ုကြီးလာတဲကိုအလုပ်တဲ ဟဲဟဲ ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ကိုမကြိုက်ဘူ လူမိုက်သံနဲဟော်တာ မျှမျှတတမရှိဘူ သူက အတ္တှိကြီးတယ်သူပြော်တာ မှန်တယ်လိုထင်တာ တရာဟော်စတိုင်တမျီူးပေါ ငါကိုးကွယ်ခဲတာ ( ) ကျေုာ်သွာပြီ ငယ်တုံကဘုန်းကြီးကျောင်းမ ၄တန်းထိစာသင်ခဲတာ အဲတုံနဲခုနဲတချုာစိဘဲ ဘကကျောင်ဆိုတ ဘာစတိုင်လဲ ဖြေ ရန်လုပ်တာမဟုပ်ဘူမသိရင် ပြော်ပြမယ်2Jun 10, 05:17 soe: ကိုသစ္စာရေ ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်ပါလား၊ သူမြင်ချင်နေတာ ကိုသစ္စာရဲ့ဒေါသပါ၊ တုန့်ပြန်သူမရှိတော့ရင် သူ့ဟာသူရပ်သွားမှာပါ၊ မရပ်ရင်လဲ ကျနော်တို့ ကျော်ဖတ်လိုက်ကြစို့လို့ အဖ်ာညှိပါပါရစေဗျာ၊ 1 Jun 10, 11:04 သစ္စာ: တစ်ယောက်တည်း နာမည်မျိုးစုံနဲ့ပေါက်ကရတွေမရေးနဲ့ ကွ။ ကိုယ်တိုင်ဘာမှ သေသေချာချာ မလေ့လာပဲနဲ့ မပြောရဘူး။ ဒါကြောင့်ပြောတယ် စာတစ်ကြောင်းတောင် ဖြောင့်အောင်မရေးတတ်ပဲ လျှောက်မပြောနဲ့ ငါ့ညီရဲ့မင်းရဲ့ အရေးအသားတွေ ကြည့်ရတာ ဘာမှမလေ့လာပဲ ရမ်းတုတ်နေသလိုပဲ။ ဘုရားက ပုံပြင်တွေပြောပြီး သာသနာပြုခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ မယုံကြည်ရင် မကိုးကွယ်ပါနဲ့ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်လို့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကို မစော်ကားရဘူး ကလေးတွေလိုပဲ ရန်ဖြစ်နေတာ မကောင်းပါဘူးကွာ။ ငါလည်းဘုန်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ စာတတ်ပေတတ် ဆရာတော်တွေ အများကြီးပါ မင်းသိချင်တာတွေ လူကိုယ်တိုင် မေးမြန်း လျှောက်ထားကြည့်ပေါ့။ ဒီမှာလာပြီး ရန်တွေ့ နေတာထက် လက်တွေ့ ကျကျ ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းတော့ သင်္ကာရှင်းတာပေါ့။ ငါကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့့ မေတ္တာတော် အနန္တကို သိခွင့်ရလို့ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ သာသနာ အရှည်ခံ့တည်တံ့ဖို့ လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ ခင်ဗျားဖွင့်လိုက်တဲ့ လင့်ခ်က "www" ရှေ့ မှာ ''။" ခံနေတယ် ဟောဒီမှာ ပြန်ဖွင့်ပြီးအစဉ်အတိုင်းတရားနာကြည့်လိုက်ပါ။ http://lknt10bd.blogspot.com/2010/05/blog-post_20.html ချမ်းမြေ့ ပါစေ။ သစ္စာ 1 Jun 10, 10:44 ar: ပြော်လိုက်ဦးမယ် ၅၅၀ ဇာတ်တောင်္က မဟာယန ခေါ အရည်ကြီးစာပေဘဲသီလာ 1 Jun 10, 10:32 lknt:(အတု): မှာတာမှန်သိဖိုး လိုလိပ်းမယ်ပြော်ကြပါ အထောက်အထာနဲ ခုခတ်နဲနော် ar ကတော့ ၉နာရီဆို တက်နေကြ လာခဲပါလာ ငါးသည်တောမဟုပ်ဘူ 1 Jun 10, 10:28 thu thu: အော် က်ုရင်သစ္စားရယ် ဘုန်းကြီးလာ လူလာ ar: ဟဲဟဲ ၀၀ ပြော်ပါစေ သူစာမဖက်တဲ ဗာလာနံဆိုတော့ ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းပါးတာပေါံ့ သူဘ၀င်မြင်ပစေ 1 Jun 10, 10:10
00: စကားတွေရှေ့ နောက်မညီ၊ ပရမ်းပတာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မဆင်မခြင် အသေအခြာ မလေ့လာပဲ ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းပါးတဲ့ အ၀ိဇ္ဖာဗာလာနံတွေနဲ့ ပြောရတာ အချိန်ကုန်ပါတယ်ဟုပ်လာသစ္စား arကလူမှန်ပါကွာမြင်တဲအတိုင်ပြော်တာမင်ကနာရအောင်
31 May 10, 14:28
သစ္စာ: စကားတွေရှေ့ နောက်မညီ၊ ပရမ်းပတာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မဆင်မခြင် အသေအခြာ မလေ့လာပဲ ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းပါးတဲ့ အ၀ိဇ္ဖာဗာလာနံတွေနဲ့ပြောရတာ အချိန်ကုန်ပါတယ် အကျိုးမရှိပါဘူး။ နေခဲ့ပေတော့.. ဘုန်းဘုန်းကျန်းမာချမ်းသာပါစေ.... စီဘောက်စာမျက်နှာတွေ ညစ်ပတ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဘုရား။ 31 May 10, 09:08
ar: ။ http://lknt10bd.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html မရှီဘူတဲ အရှူးလုပ်တာလာ သစ္စာ: မင်းအမှောင်ထဲကထွတ်ခဲ လူတွေအတွက်အကျိုးမရုပ်စေနဲ အကျိုးရှိတဲ့အလုပ် လုပ်ပါ။ သစ္စာ: တရားတွေနာပါဗျာ ဟာ ဟ မင်းနှစ်သွာမယ် ခုတရားတွေကခြောင်တာနဲ မြောက်တာနဲ ပြီရင်သူတိုမလုပ်နိုင်တာတွေခိူင်လိမ်မယ် စဉ်စားပါတွေပါ
30 May 10, 10:19
သစ္စာ: အတော်ပိန်းတာပဲ ဒီသတ္တ၀ါ မပေါက်နိုင်သေးပါလား : အချိန်ကုန်ပါတယ် အကျိုးရှိတဲ့အလုပ် လုပ်ပါ။ ဟောဒီမှာတရားတွေနာပါဗျာ။ စိတ်ရှိရင်ပေါ့။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ http://lknt10bd.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html
ar: သစ္စာ: စာတစ်ကြောင်းတောင်ဖြောင့်အောင် မရေးတတ်သေးပါလား. ဟားဟား ဖက်တက်တာဘဲ ဘာဇြစ်လဲ သက်ပုံစစ်မှာလားစာဖတ်လားပြော နိုင်အောင်ပြော်ပါလားဗဟုသုတရတပေါ့ အာလုံးအတွက် ခုတော့ဟဲဟဲ သတ္တ၀ါတွေ ကျန်းမာပါစေတဲ ဟဲဟဲ သေနပ်နဲ့ပစ်ခံရအုံးမယ် ဟီးဟီး
30 May 10, 09:42
သစ္စာ: စာတစ်ကြောင်းတောင်ဖြောင့်အောင် မရေးတတ်သေးပါလား......အော်....ဒုက္ခဒုက္ခ သတ္တ၀ါတွေ ကျန်းမာပါစေ။
30 May 10, 09:31
ar: အော်... အ၀ိဇ္ဖာဆိုတာသိလိုလာ ကိုရင်သစ္စားရယ်ကင်းရှင်းရဲလာဟဲဟဲ
29 May 10, 18:57
သစ္စာ: အော်... အ၀ိဇ္ဇာ ဆိုတာ ဒါမျိုးပါလား။ လက်တွေ့ မြင်ရတာပေါ့။ အင်း... 29 May 10, 09:30
ar: ပိက်ထာလိုက် ဖွင်ထာလိုက်တောမလုပ်ပါနဲ blog archiveကစာတွေကို နားကြားပြင်းကပ်စရာဆိုတဲထဲမှာ သည်ဒါလေထည်ပေပါလာ ခေတ်မရိုတောတဲပုံ့ပြင်တွေ ဟောကြပြော်ကြလုပ်ကြရင် နားကြားပြင်းကပ်စရာ ဟဲဟဲ
tint: မေးခွန်းမေးကြသူများနဲ့အခြားဆိုက်မှာ ဘုန်းဘုန်းဦးလောကရဲ့မျှဝေသောတရားတော်တို့ ကို နာယူကြသော မိတ်ဆွေများခင်ဗျား ဘုန်းဘုန်းနေကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခက်အခဲလေးတခု ၂ခုကြောင့် ခဏ အွန်လိုင်းမတက်နိုင်သေးပါ
26 May 10, 08:06
soe: မရောက်တာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ ဘုရား၊ ရောက်ပြန်တော့လဲ စီဘောက်ထဲကစာတွေ ဖတ်ရုံလောက်နဲ့ပဲ ပြီးခဲ့တာများခဲ့ပါတယ်၊ အရှင်ဘုရား ခုလို သာသနာအကျိုး ပြုနိုင်နေသေးတာကို ကြေနပ်အားရနေပါတယ် ဘုရား၊ ထက်စု အမေးလေးကို သဘောကျတယ် အရှင်ဘုရား အဖြေကိုလည်း မှတ်သားချင်တယ်ဘုရား၊ သာသနာ့ဘဏ္ဍာ အဟောသိကံဖြစ်ရတယ် ဆိုတာနဲ့များ သက်ဆိုင်မလားလို့ အတွေးဆန့်မိပါတယ်ဘုရား၊ ရွှေတိဂုံဘုရားက ရွှေတွေပျောက်သွားတာလဲ အမှတ်ရမိတော့ ထက်စု ပြောသလို ပြုလိုက်တာများလားလို့လဲတွေးနေမိပါသေးတယ်၊ သာသနာ့ဘဏ္ဍာအလှူငွေကို အဝေဘန်မတတ်လို့ အ၀ီစိ ရောက်ရတဲ့သူတွေအကြောင်းလဲ ကြားဖူးပါတယ်ဘုရား၊ ဘဏ်မှာအပ်ထားတဲ့ ဘုရားအလှူငွေတွေ ပြန်ထုတ်ယူ အသုံးပြုခွင့်မရတာလည်း ကြားဖူးတော့ အဲဒါရဲ့ အကျိုးအပြစ်လေးကိုလည်း မိန့်ကြားသွန်သင်ပါ အရှင်ဘုရား၊ တစုံတရာ မလွတ်မကင်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း တပြည့်တော်ကိုသည်းခံပါ။ lknt: ဒကာလေး soe ရေ... သာသနာအတွက် လိုအပ်လို့ အခြေအနေ အဆင်ပြေရင် ရေးပေးပါ့မယ်... စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ... 27 May 10, 03:32 (ဗုဒ္ဓတရားတော်များ စီဘောက်စ်မှ)
ဂျေဂျူဝိုင်: တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ ရဟန်းအတွက် ဘုရားရှင်က ပညတ်ထားသော သိက္ခာပုဒ်ကို လူတို့အား မပြောကောင်းပါ။ သိက္ခာပုဒ်တို့ ဤကဲ့သို့ ရှိပါလျှက် ဤရဟန်းများက ဤသို့ မကျင့် ရဟန်းပျက် ဖြစ်လေယောင်တကား ဟု အကြည်ညို လျှော့နိုင်သောကြောင့် ဘုရားရှင်မှ ရဟန်းတော်များ ကျင့်ရသော သိက္ခာပုဒ်များကို လူတို့အား မပြောရဟု ပညတ်ထားခြင်း ရှိတော်မူခဲ့ပါသည် ဘုရား။ မေးမြန်းခြင်း ရှိခဲ့လျှင်တောင်မှ အကြည်ညို ပျက်ဖွယ် ရှိရင် လျှော့ပြောရကြောင်းပါ ဘုရား။
lknt: ဒကာလေး ဂျေဂျူဝိုင် ရေ... ရေးစေချင်လို့ မေးတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်... ဒါကြောင့် တတ်သလောက်လေး ခံစားရသလောက် ရေးပေးပါ့မယ်... သည်အချိန် ဘုန်းကြီးအတွက် ကန္တာရပဲ ဘ၀ခရီးခဲက ကြမ်းတမ်းနေတယ်... ဒါကြောင့် မေးခွန်းတွေ သိရတာ နောက်ကျ... အဖြေတွေ နောက်ကျနေပါတယ်... လူ-သာမဏေအား ရဟန်းဝိနည်း သင်မပေးရ သင်ပေးရင် အာပတ်သင့်စေ ဆိုတာတော့ ၂၂၇-မျိုးသော သိက္ခာပုဒ်ထဲမှာ ရှာလို့ကို မတွေ့သေးပါဘူး... နံပါတ်ကလေး ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်... ၀ိနည်းတွေ ဖတ်လေဖတ်လေ လူတွေကို ပိုပြီး သိစေချင်လေ ဘုရားကြည်ညိုလေ ဖြစ်နေပါတယ်... တကယ်လို့ပါခဲ့ရင်လည်း ဆဋ္ဌမူ ပါဠိတော်မှလွဲ ဘယ်ထဲပါပါ ဘုန်းကြီး စိတ်မ၀င်စားပါဘူး...
ပါရာဇိကနှင့် သံဃာ့ဒိသိသ် အပြစ်သင့်နေသော ရဟန်း (အရှင် _ ဦး _ ) အကြောင်း သံဃာ့သမ္မုတိမရပဲ လူ သာမဏေအား မပြောရ ပြောခဲ့သော် ပါစိတ်အာပတ်သင့်... အောက်အာပတ် ၅-မျိုး သင့်နေကြောင်း ပြောကြားက ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်တယ်လို့တော့ တွေ့မိပါတယ်... ပိဋကတ်သုံးပုံမှာ နှစ်ပုံသာ လူနဲ့သာမဏေကို သင်ပေးရမယ် ၀ိနည်းကို သင်မပေးရလို့တော့ မတွေ့မိသေးပါ... တရားတော်များ ကုန်စင်အောင် မလေ့လာနိုင်တာကတော့ အမှန်ပါပဲ...
ကိုယ်ရင် သာမဏေတွေ ၀ိနည်းလိုက်နာစရာမလိုလို့ သင်မပေးခြင်း... လူတွေ ၀ိနည်း ၂၂၇-သွယ် လိုက်နာစရာမလိုလို့ သင်မပေးခြင်းများကို... တချို့က သင်မပေးရ ပြောမပြရလို့ ထင်နေတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... တစ်ချို့ ဘုန်းကြီးများကတော့ သူတို့ အနေကျပ်မဆိုးလို့ သင်မပေးစေလိုတာတွေ တွေ့ဘူးပါတယ်... ပိဋကတ်သုံးပုံမှ တရားတော်များ လူတွေကိုသင်ပေး၍ အပါယ်လားရကြောင့် မပါရှိ၍ သိသလောက်လေး သင်ပေးမိပါတယ်...
ကုသိုလ်လိုချင်လို့ ဒုလ္လဘလာဝတ်ကြတဲ့ လူတွေကို သိမ်ထဲမှာ ပါရာဇိကလေးပါးပဲ သင်ပေးကြလို့ သံဃာ့ဒိသိသ်သင့်သွားရတဲ့ ဒုလ္လဘလေးတွေ နည်းမည်မထင်ပါ... သူတို့တစ်တွေ အများကြီး နစ်နာပါတယ်... ဒါကြောင့် သံဃာ့ဒိသိသ် ၁၃-ပါး အပါဝင် ၀ိနည်း ၂၂၇-မျိုးလုံး ခေါင်းစဉ်လောက်တော့ သိအောင် သင်ပေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်... မမှတ်မိကြတာကတော့ သူတို့ကံပါပဲလေ...
ဘုန်းကြီးက... ကပ္ပိယံ ကရောဟိ... ဆိုရင်... လူက ကပ္ပိယံ ဘန္တေ... ဒါလောက်မှ မတတ်ရင်လည်း... ငါ့ကို အပ်စပ်အောင်လုပ်ပေးပါ ဆိုတာနဲ့... အရှင်ဘုရား အပ်စပ်အောင် လုပ်ပြီးပါပြီဘုရား လောက်တော့ သိကြမှ ဘုန်းကြီးများ အာပတ်နည်းပေလိမ့်မည်... ခုတော့ ဘုန်းကြီးများကလည်း သည်လိုမပြောတော့ပါ... ကပ္ပိယ အမည်ခံတွေကလည်း မသိတော့ပါ... လူတွေကတော့ ဝေလာဝေးပေါ့... တချို့ကမေးပါသေးတယ်.. ကပ္ပိယဆိုတာ ဘုန်းကြီးအနား ကပ်ပြီးနေတော့ ရလို့လားတဲ့...
ကံကောင်းလို့ ရဟန်းဖြစ်လာရသူဆိုတော့... ဘုန်းကြီးက သပိတ်နဲ့ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတာ များပါတယ်... တချို့က အရှင်ဘုရား သပိတ်နဲ့ မဘုဉ်းပါနဲ့တဲ့... သည်တော့ ဘာလို့လည်း ဒကာမကြီးဆိုတော့... သပိတ်ကြီးက ဆေးရတာ ခက်လို့ပါတဲ့... လောကကြီးက အဲလိုကွယ်... သပိတ်လေးနဲ့ ဆွမ်းဘုဉ်းခွင့်ရဖို့ ဘုန်းကြီးတို့မှာ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာတွေ နည်းမှမနည်းပဲ... သူတို့ သပိတ်လေး ဆေးခွင့်ရခြင်းသည် ကံကောင်းလွန်းလို့ဆိုတာ ဒါကို သူတို့ မသိကြရှာဘူးလေ... မျက်စိထဲမြင်မိတာကတော့လေ နောက်ဆို... ရဟန်းခံပွဲတွေမှာ ပရိက္ခရာ ၈-ပါး ပန်ချီကားလေးနဲ့ ရဟန်းခံကြလိမ့်မယ်... ပရိက္ခရာဆိုင်ရှင်တွေ ပန်းချီကားတွေ စုဆောင်းထားကြပေတော့... ပရိက္ခရာဓါတ်ပုံတွေ ကော်ပီကူးထားကြပေတော့...
ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ လူတွေ... တစ်ချို့ပေါ့...
ဘုန်းကြီးကို မကပ်ရသေးတဲ့ဆွမ်း စားခိုင်းတယ်...
ဒါဟာ ၀ိနည်းမသိလို့... သိရဲ့သားနဲ့စားခိုင်းရင် ဘုန်းကြီးကို ဖျက်ဆီးတာပဲ...
ဒါဟာ ၀ိနည်းမသိလို့... သိရဲ့သားနဲ့ဟောခိုင်းရင် ဘုန်းကြီးကို ဖျက်ဆီးတာပဲ...
ဒါဟာ ၀ိနည်းမသိလို့... သိရဲ့သားနဲ့တောင်းရင် ဘုန်းကြီးကို ဖျက်ဆီးတာပဲ...
ဘုန်းကြီးကို ရွှေငွေ ရတနာ မအပ်မစပ် လက်ထဲထည့် လှူချင်တယ်...
ဒါဟာ ၀ိနည်းမသိလို့... သိရဲ့သားနဲ့သည်လိုလှူရင် ဘုန်းကြီးကို ဖျက်ဆီးတာပဲ...
ဘုန်းဘုန်းဘုရား... ဘုရားစကား နားထောင်နဲ့နော် ကျမစကား နားထောင်ပါနော်... နော်... ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်နေတယ်... စကားလုံး ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဘုန်းကြီးတွေကို မအပ်စပ်မှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ခိုင်းကြရင် သာသနာဖျက်တာပါပဲ... ဒါဟာ သာသနာကို ဖျက်ဆီးနေတာပါပဲ... ဘုရားကိုကြောပေးပြီး လက်ဝါးဖြန့် ငွေအလှူခံနေကြတာ အဆိုးဆုံး ဘုန်းကြီးအတွက် စိတ်အဆင်းရဲဆုံးပဲ... ဒါမျိုးတွေရေး ပြောနေလို့လည်း အခြေအနေက မကောင်းဘူး အတော်လူမုန်းများနေတယ်... သူမုန်းလည်း အရေးမလုပ်ပါဘူး... ဘုရားမမုန်းအောင်ပဲ နေတော့မယ်... (ဘုရားမမုန်းအောင်-တင်စားချက်ပါ)
ဒါကတော့ ဘုန်းကြီး ခံစားချက်ပဲလေ...
တခြားဆရာတော်များ ဘယ်လို ခံစားရလဲတော့ မသိပါဘူး...
သည်စာရေးရင်းနဲ့ လူစု နှစ်စုကို ယှဉ်ကြည့်မိတယ်... ရှေးယခင်က... ရဟန်းတော်များ ရဟန်းနဲ့ မတော်တာတွေ လုပ်ကြတော့ လူအများက ကဲ့ရဲ့ကြလို့ မြတ်ဗုဒ္ဓက ၀ိနည်းစည်းကမ်း ထုတ်ရတယ်... ကဲ့ရဲ့သူ လူစုကို ပထမအုပ်စုထား... ယခုခေတ် ၀ိနည်းစည်းကမ်း ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ရဟန်းတွေ အပြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေသူများကို... ဒုတိယအုပ်စုထား... ပထမအုပ်စုနဲ့ ဒုတိယအုပ်စု ဘယ်လောက်များ ကွာသွားသလဲ... ဒုတိယ အုပ်စုထဲ မနေချင်ရင် ရဟန်းတွေ အပြစ်ဖြစ်အောင် မလုပ်နဲ့ပေါ့လေ...
သာသနာကို စောင့်ရှောက်လိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ ၀ိနည်းစည်းကမ်းတွေ သိအောင်လုပ်ကြရမယ်... ဘုရားသားတော် ရဟန်းတော်များကို အာပတ်မသင့်အောင် စောင့်ရှောက်ကြရမယ်... ၀ိနည်းဖေါက်ပြီး မတော်တာတွေ လုပ်နေကြရင် ပြုပြင်ပေးကြရမယ်... သည်လိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်... သည်လိုမဖြစ်ပဲ ၀ိနည်းနဲ့တိုင်းပြီး အကုသိုလ်ရှာနေရုံ... ၀ိနည်းမလေ့လာပဲ အကုသိုလ်ရှာနေရုံ ဆိုရင်တော့ သူတို့ထိုက်နဲ့ သူတို့ကံ သူတို့ခံကြပေါ့... ဘုန်းကြီးဘက်ကတော့... သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ... အားလုံးသော အလှူတွေထဲမှာ တရားအလှူ အမြတ်ဆုံး ဆိုထားတော့ ကိုယ်ဘက်ကတော့ ကုသိုလ်ရပြီးသား... အကျိုးရှိနေတာကတော့ သေချာပါတယ်... ဒါကြောင့်လည်း အွန်းလိုင်းကနေ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့... မသိသေးသူတွေကို ပြောပြဖို့.. ဖတ်စရာ မရှိသူတွေ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်အောင် ထေရ၀ါဒမူအတိုင်း တင်ပေးဖို့ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ သည်ကုသိုလ်ကို ယူသွားမှာပါပဲ... တခါတရံ ကျန်းမာရေးနဲ့ အတော်ပင်ပန်းပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲ ဉာဏ်ယှဉ်လို့ ဆက်လုပ်သွားပါမယ်...
သည်စာကို ဖတ်မိကြပြီး ရဟန်းတစ်ပါး (သို့) လူတစ်ယောက် အမှန်ကို လျှောက်မိမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်... ဘုန်းကြီးအတွက်ကတော့ လူနတ်ချမ်းသာဖြစ်ကြောင်း တရားတစ်ပုဒ်ပဲလို့ ခံယူပါတယ်...
သည်လို ရေးခွင့်ကြုံအောင် မေးတဲ့ ဂျေဂျူဝိုင်ကိုလည်း အရပ်သုံးစကားနဲ့ပြောရရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့... ဘုန်းကြီးလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး မျှတပါစေ...
24 May 10, 22:49
lwinkotoe: ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဖြေကို ဒသနစီဘောက်မှာ ကြည့်ဆိုလို့လိုက်ရှာတယ်ဘုရား။ ရှာလို့မတတ်လို့လား မသိမတွေ့ဘူးဘုရား။ ဘလိုရှာရမလဲဘုရား။ cbox တော့ တွေ့ပီဘုရား။ sign up လုပ်ပီးမှကြည့်လို့ရမှာလားဘုရား lknt: ဒကာလေး lwinkotoe ရေ... စီဘောက်စ်တွေ က အပေါ်ဆုံး ဘောက်စ်ထဲမှာ ကြည့်လိုက်ပါ... အဆင်ပြေပါစေ... စိတ်ချမ်းသာပါစေ... 24 May 10, 04:23
ထက်စု: အရှင်ဘုရား တပည့်တော် သိချင်တာတခုရှိလို့ပါဘုရား.. ဘုရားဌာပနာတည်တဲ့အခါ ရွှေတွေ ငွေတွေ ထည့်ပြီး ဌာပနာလုပ်တာ မြေကြီးထဲ မြှပ်နှံထားတာ တွေက ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါက စခဲ့ပါသလဲ. မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေမှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ပါတယ်လို့ ပါပါသလား ဘုရား.. တပည့်တော် အမြင် အယူအဆ အရ.. ရွှေငွေတွေကို ဌာပနာမည့်အစား အဲဒါတွေကို ထုခွဲရောင်းချပြီး ဘုရားစေတီပုထိုးများကို အများကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တာက ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်ဘုရား.. လူအများ နားလည်အောင် ရှင်းပြတော်မူပါဘုရား။ (ဋ္ဌ-ဌ)
၅.၂၈.၂၀၁၀ lknt: ဒကာမကြီး ထက်စု ရေ... ဘုရားမှာ ရတနာမျိုးစုံ ဌာပနာ (ဌာပနာ=ထားခြင်း) ထည့်၍ သိမ်းဆည်းထားခြင်းက ကောင်းတာလည်းရှိ... မကောင်းတာလည်းရှိ... ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းကောင်းနဲ့ လှူတတ်သူလည်းရှိ... ရည်ရွယ်ချက် ဘာမှန်းမသိပဲ လှူလိုစိတ်တစ်ခုနဲ့ သူများလုပ်လို့ လုပ်ကြတာလည်းရှိ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ ဌာပနာထားခြင်းကို မပြစ်ပယ်တာလည်းအမှန်... လုပ်နည်းမှန်ဖို့လိုအပ်တာလည်း အမှန်ပါပဲ...
ဇာတ်တော်တွေထဲမှာ ရှေးဘုရားရှင်များရဲ့ ဓာတ်တော်တိုက် ဌာပနာတိုက်များအကြောင်း ခဏခဏ ပါတဲ့အတွက်... ဘယ်အချိန်က စတင်ခဲ့လည်းဆိုရင်တော့... ရှေးရှေး သဗ္ဗညုတ ဘုရားရှင်များ လက်ထက်ကထဲက စခဲ့တာလို့ ပြောရမှာပါ... ခုခေတ် မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ တပည့်သား ရဟန္တာတွေ ပျံလွန်တော်မူရင်... ဓာတ်တော်များကို ဌာပနာ၍ စေတီတည်ထားလေသည်လို့ ဆိုပါတယ်... ရွှေငွေ ရတနာများ ပါသည်လို့တော့ သတိမထားမိပါ... မြတ်ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခန်းမှာတော့ ဗန္ဓုလစစ်သူကြီး၏ဇနီး မလ္လိကာ,က မဟာလတာတန်ဆာကို ဘုရားရှင်အား ၀တ်ရုံပေး၍ လှူဒါန်းလိုက်သည်လို့ ဆိုပါတယ်... ဌာပနာတဲ့ထိတော့ မတွေ့ရပါဘူး... အရှင်မဟာကဿပနဲ့ မင်းအဇာတသတ်က မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော် မွေတော်များနဲ့အတူ ရတနာတစ်ချို့ ဌာပနာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်... တချိန်မှာ စေတီကြီး ပျက်စီးခဲ့သော် တွေ့ရှိသောသူသည် ဌာပနာထားတဲ့ ရတနာတွေကို ထုခွဲပြီး စေတီအသစ် ပြန်လည် ပြုပြင်စေလိုတဲ့ စေတနာကို တွေ့ရပါတယ်...
နောက်ပိုင်းမှာလည်း ခေတ်အဆက်ဆက် စေတီတည်ပြီး ရတနာမျိုးစုံထည့်ဝင် လှူဒါန်းကြတဲ့အခါမှာ သာမန် အလှူဒါနအဖြစ်နဲ့ ထည့်တာလည်း တွေ့ရပါတယ်... ထုခွဲရောင်းချပြီး စေတီပြုပြင်ရန် စားရိတ်ဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်... ယတြာချေတဲ့သဘောနဲ့ ထည့်တာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်... အခြား စိတ်ကူးမျိုးစုံနဲ့ ထည့်ဝင်တာလည်း တွေ့ရပါတယ်...
လှူတဲ့အတွက် ဒါနကတော့ ဖြစ်ပါတယ်... အကျိုးပေးကတော့ ဉာဏ်နဲ့စေတနာပေါ်မှာ မူတည်မယ်... နောက်ပိုင်း တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချခွင့် ရမရကတော့ သတ်သတ်ပေါ့... ခုခေတ်သုံးနေတဲ့ငွေ သိန်း ၁၀၀ ဌာပနာတဲ့ထဲထည့်... နောင်နှစ် ၁၀၀-မှာ ပြန်လည် တူးဖေါ်မယ်ဆို ဘုရားပြုပြင်ဖို့ ဘာမှရမှာ မဟုတ်ပါဘူး... သည်အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေက အများကြီးတွေ့ရပါတယ်... ရှေးဟောင်း ဘုရားကြီးတစ်ဆူ ပျက်ဆီးပြီး ဌာပနာတွေ ထွက်လာပါတယ်... ဓာတ်တော်တွေကော ဆံပင်တွေကော ပစ္စည်းမျိုးစုံပါပဲ အဲဒီထဲမှာမှ ငွေတုံး အကြီးကြီးတစ်တုံး... သူ့ဘေးမှာမှ စာကတော့ ရောင်းချ၍ ဘုရားပြုပြင်ပါလေတဲ့... သည်တော့ ခုခေတ်မှာက ငွေကတန်ဖိုးမရှိ ရွှေကမှ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန် သူ့ငွေတုံးက ရောင်းလိုက်တော့ ဘာမှမဖြစ်လောက်... ထည့်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ တန်ဖိုးရှိလို့ ထည့်လှူလိုက်တာမျိုး ဖြစ်မှာပါပဲ... ပုဂံငလျှင်ကြောင့် ဘုရားတွေ ဗိုက်မပေါက်ပဲ ဌာပနာကြောင့် စေတီ, ဆင်းတုတွေ ဗိုက်ပေါက်ရတာ အများကြီးပါပဲ... ဗိုက်ပေါက်ခြင်းကတော့ ဌာပနာပစ္စည်းတွေလိုချင်လို့ သူခိုး ဖေါက်တာရယ်... ဌာပနာလှိုဏ်ခေါင်းတွေကြောင့် စေတီတော် မတောင့်တင်းပဲ နေတာကြောင့်ရယ်ပါ... သတိပြုဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်... ထည့်ခြင်းထည့်လျှင်တော့ ဓာတ်တော်များနဲ့အတူ... တရားတော်အစစ်အမှန်များ... သာသနာသုံးပစ္စည်းများကို မှတ်တမ်းအဖြစ် ဌာပနာခြင်းက ပိုပြီး သင့်လျှော်တယ် ထင်တာပါပဲ...
တစ်ချို့ စေတီအသစ်တည်တဲ့အခါ သဒ္ဓါတရားက အစပိုင်းမှာ အရမ်းကောင်းကြတော့ ဌာပနာတဲ့ထဲ ပစ္စည်းတွေ များစွာထည့်ကြပါတယ်... ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း စေတီက ပြီးအောင်မတည်နိုင်နှင့် အလှူရှင်ကို စောင့်မျှော်နေကြရသော စေတီများကိုလည်း တွေ့ခဲ့ဘူးပေတယ်... မသင့်တော်ပါပေ... သည်လိုဖြစ်မည့် အနေအထားမျိုး ရှိကြပါက ဌာပနာကို စေတီပြီးမှ စိတ်ကြိုက်ထည့်ပြီး ပိတ်လို့ရသော စနစ်မျိုး တည်သင့်ပေတယ်... အောက်ဌာပနာ အရင်ထည့်ကြရမယ် ပြီး အလယ်ဌာပနာ ပြီး အပေါ်ဆုံးဌာပနာ ထည့်ပိတ်ကြရမည်ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားချက်မျိုး မတွေ့ဖူးပါပေ... ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အပြောသာ ရှိပါပေသည်...
ဘယ်လိုပစ္စည်း ထည့်သင့်တယ်ဆိုတာလည်း စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်...
ယတြာချေတဲ့သဘောနဲ့ ထည့်ခြင်းကတော့ လုံးဝကို မလုပ်သင့်ပါဘူး...
ပြုပြင်လှူဒါန်းစရာ နေရာ စေတီပုထိုးတွေ အများကြီး ဘေးဖယ်ထား... မပြီးပြတ်သေးတဲ့ဘုရား ဘေးဖယ်ထားပြီး အနီးအနားက နာမည်ကြီးဘုရားမှာ ဌာပနာတွေ ဇွတ်ထည့်တာလည်း စဉ်းစားဖွယ်ရာပါပဲ...
ခုခေတ်အနေနဲ့ ငတ်မွတ်တဲ့ဘေးတွေ များလှပါတယ်... ဒါကြောင့်...
လက်ရှိ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း အသုံးချခြင်းဟာလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်...
မိမိဘေးမှာ ငတ်နေသူ လိုအပ်နေသူတွေကို မပေးကမ်းပဲ ဘုရားဌာပနာထည့်ခြင်းကလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ... ဒါနမို့ မထည့်နဲ့လို့တော့ မပြောလိုပါဘူး... မြတ်ဗုဒ္ဓအလို ကျ,မကျ စဉ်းစားသင့်တာပါ... အခြေအနေ အချိန်အခါတွေကို ကြည့်ပြီး ဉာဏ်ယှဉ် အလုပ်လုပ်ကြဖို့တော့ လိုပါတယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဉာဏ်အလုပ်ပါ... ဉာဏ်ယှဉ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်... ဉာဏ်ရှိဖို့ရာလေ့လာပါ... အရာရာကို လေ့လာသုံးသပ် ဆင်ခြင်ရပါမယ်...
ဌာပနာနဲ့ ပါတ်သက်လာတော့ ကြုံလို့ပြောတာပါ... သည်ဘက်မှာ ကြားလိုက်ရတာ... စေတီတစ်ဆူမှာ ဌာပနာဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက လည်ပြီး အလှူခံပါတယ်တဲ့... ရလာတဲ့ထဲက စိန်နားကပ်ကြီးတစ်ရံဟာ မကြာခင်မှာပဲ သူနဲ့ပါလာတဲ့ အမျိုးသမီးနားမှာ မြင်ရတော့ ပြဿနာမျိုးစုံ ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်... ဒါမျိုးတွေကလည်း လောကကြီးမှာ အများသား... မစွပ်စွဲပါဘူး... ဗဟုသုတ ပြောပြရုံပါ...
ဘာကြောင့်ဆို ဘေးပယောဂကြောင့် အပုပ်နံ့လှိုင် အထင်အမြင် လွဲမှားတတ်တာတွေကလည်း ရှိပါတယ်... တစ်နေ့က လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ အပုပ်နံ့ရလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ပုံးလေးထဲမှာ ကြွေကျတဲ့ သစ်သီးနဲ့ မြက်တချို့ မိုးရေနဲ့တွေ့ပြီး အတော်လေးပုပ်နေတာတွေ့ရလို့ နေပူရာမှာ သွန်ပြစ်ပြီး လက်ဆေးတယ်... ဒါပေမဲ့ သည်အပုပ်နံ့က တော်တော်နဲ့ပျောက်မသွားဘူး.. လူမှာစွဲနေတယ်လေ...
ဟိုမှာလှူ သည်မှာမလှူနဲ့ ဆိုတာမျိုးကတော့ မပြောသင့်တဲ့အရာမို့ မပြောလိုပါဘူး...
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျနဲ့ အတော်အလှမ်းကွာဝေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်...
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ မြင်နိုင် သိနိုင်ကြပါစေ...
၅.၂၆.၂၀၁၀ 23 May 10, 17:00
တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ ၅၅၀ ဇာတ်တော်တွေ ဖတ်သွားပါတယ်... copyလည်း ကူးယူသွားပါတယ်ဘုရား... အရှင်ဘုရား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... lknt: ငြိမ်းချမ်းပါစေ တပည့်တော် ရေ... 22 May 10, 07:14
lwinkotoe: တပည့်တော်သည် ဗေဒင်လက္ခဏာပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးချင်ပါသည်။ သို့သော် အခြားသောဆရာများကဲ့သို့ အဓိပါယ်မဲ့သော ယတြာမျာအစား သရဏဂုံ သန့်ရှင်းစွာတည်စေခြင်း၊ သီလလုံခြုံအောင် ဆောက်ထိန်းစေခြင်း၊ သမထ၊ ၀ိပသနာဘာဝနာပွားများစေခြင်းဖြင့် ကံ (မီးပျက်သွားလို့ပါဘုရား) ကို မြှင့်တင်အောင် ပြုခိုင်းပါမည်ဘုရား။ ထိုကဲ့သို့ အများအကျိုးဆောင် သာသနာပြုပါမည်ဘုရား။ တပည့်တော် ဆရာကြီးဦးဆန်းလွင်၏ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသည်မှာ စာအုပ်နှင့် ရွေပြည်သာဆရာတော်၏ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စာအုပ်များကို ဖတ်ပီး အောက်ပါမေးခွန်း ပေါ်လာပါသည်ဘုရား။ ဗေဒင်လက္ခဏာပညာရပ်ဖြင့် အထက်ပါ တပည့်တော် လျှောက်ထားသည့်အတိုင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလျှင် သမာအာဇီဝ ဖြစ်ပါမည်လားဘုရား။ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် တပည့်တော်အား ဖြေကြားပေးတော်မူပါ ဘုရား။ ရိုသေစွာဖြင့် လျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဘုရား။ ဘုန်းဘုန်း သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပီး သာသနာတော်အကျိုးကို စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ တပည့်တော် ဆုတောင်းပါသည် ဘုရား။
တခြား ဗေဒင်ဆရာများလို ယတြာများအစား ((သရဏဂုံ သန့်ရှင်းစွာတည်စေခြင်း၊ သီလလုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းစေခြင်း၊ သမထ၊ ၀ိပဿနာဘာဝနာ ပွားများစေခြင်းဖြင့် ကံကို မြှင့်တင်အောင် ပြုခိုင်းပါ့မယ်)) ဆိုတာလေးက စေတနာတော့ ကောင်းပါတယ်...
(ဗေဒင်မေးကြတာ ဘုန်းကြီးတို့ ဖာသိဖာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ များပုံပေါ်တယ်... ဗေဒင်ဆရာတွေ ယတြာချေခိုင်းလိုက်ရင် ဗုဒ္ဓဘုရားကို စက္ကူထီး၅-လက် လှူလိုက်ပါ... အရှေ့ထောင့်ကနေ ဗုဒ္ဓဘုရားကို ရေလောင်းပါ စသည်ဖြင့်ပဲ တွေ့ရတာ များတယ်... အလာရှင်ကို ရေ ၅-ခွက်လောင်းပါလို့ ပြောတာမျိုး လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ၉-ပတ်ပတ်ပါ ဆိုတာမျိုး မကြားရဘူး... ဘုန်းကြီးတို့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့ အတော်ညံ့ပါတယ်... ကိုယ့်ဟာကို မကြိုးစားချင်ကြဘူး... သူများခိုင်းတာပဲ လုပ်ချင်ကြတယ်...။ လာချေတဲ့ ယတြာတွေကလည်း ဘုန်းကြီးတို့မှာ ဘာမှလုပ်မရ... ဘုရားပေါ်မှာ အမှိုက်ရှုပ်တာပဲ များပါတယ်...) အားလုံးပဲ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဘ၀တက်လမ်းတွေ ဖြောင့်တန်းကြပါစေ...
တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့နေကြရင် လူအတွေထင်ကြတယ်လို့ အရှင်ဘုရားပြောတာ မှန်ပါတယ်... ထင်ချင်သလိုသာ ထင်ကြပါစေဘုရား... ထင်တာကသူတို့ အလုပ်ပါ... ခုနက အရှင်ဘုရားပြောသလို မုဒိတာနဲ့ဥပေက္ခာကိုကျင့်ပြီး သူတို့ အပေါ် သူတော်ကောင်းစိတ်ပဲ ထားလိုက်ပါ့မယ်ဘုရား... အရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း လိုက်နာရင်းနဲ့ ပေါ့... အရှင်ဘုရား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... 15 May 10, 21:29
lknt: တပည့်တော်ရေ... ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ သာဓုသုံးကြီမ် ခေါ်သွားပါတယ်... မိသားစုအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ... 15 May 10, 16:23
myamgmg: အရှင်ဘ၇ားတပည့်တော်ကို တစ်ခုမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဘု၇ား ညီတော်အာနန္ဒာကို သောတာပန်ဖြစ်အောင် မြတ်စွာဘုရာဟောတဲ့တရားလေး သိချင်လို့ပါဘုရား ဆရာတော်ကျန်းမာပါစေဘု၇ား 15 May 10, 21:26 lknt: ဒကာလေး myamgmg ရေ... မတွေ့တာကြပြီပဲ... မျှတကြရဲ့လား... အရှင်အာနန္ဒာက မြတ်ဗုဒ္ဓဟောလို့ သောတာပန်တည်တာ မဟုတ်ပါ... အရှင်ပုဏ္ဏ ဟောကြားတဲ့တရားနဲ့တည်ပါတယ်... တရားကတော့ ကောင်းတယ် ကြေးမုံ တရား... မနက်ဖြန်ညမှပေါ့. 5.16.2010
lknt: ဒကာလေး myamgmg ရေ... ညီတော်အာနန္ဒာကို မန္တာဏီ ပုဏ္ဏေးမရဲ့သား အရှင်ပုဏ္ဏမထေရ်က ကြေးမုံတရားဟောလို့ တရားထူးရ သောတာပန်တည်သွားပါတယ်... လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ကြည်လင်နေတဲ့ရေခွက် ဥပမာပြပြီး ဟောကြားတဲ့တရားပါပဲ... အစွဲပြုလို့သာ ငါဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ ပပဉ္စတရား သုံးပါးဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တဲ့...
ပပဉ္စဆိုတာက သံသရာကို လည်စေတတ်တဲ့တရားပါ... တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိကိုခေါ်ပါတယ်...
ရုပ်ကို အစွဲပြု၍ 'ငါ ဖြစ်၏' ဟူသော ပပဉ္စတရား ဖြစ်ပါတယ်...
ဝေဒနာကို အစွဲပြု၍ 'ငါ ဖြစ်၏' ဟူသော ပပဉ္စတရား ဖြစ်ပါတယ်...
သညာကို အစွဲပြု၍ 'ငါ ဖြစ်၏' ဟူသော ပပဉ္စတရား ဖြစ်ပါတယ်...
သင်္ခါရကို အစွဲပြု၍ 'ငါ ဖြစ်၏' ဟူသော ပပဉ္စတရား ဖြစ်ပါတယ်...
၀ိညာဏ်ကို အစွဲပြု၍ 'ငါ ဖြစ်၏' ဟူသော ပပဉ္စတရား ဖြစ်ပါတယ်...
ပပဉ္စတရားဖြစ်ရင် သံသရာလည်မယ်... အစွဲမပြုရင် သံသရာပြတ်မယ်...
ဒါကို ရှင်းအောင်ဆိုပြီး ဥပမာပြပါတယ်...
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ စင်ကြယ်နေတဲ့ မှန်မှာဖြစ်စေ ရေခွက်မှာဖြစ်စေ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ... မိမိရဲ့မျက်နှာ ပုံရိပ်ကို မြင်ရပါတယ်... သည်လိုမြင်ရခြင်းဟာ မှန် သို့ ရေခွက်ကို အစွဲပြု၍သာ မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်... မှန် သို့ ရေခွက်ကို အစွဲမပြုဘူးဆိုရင် မမြင်ရပါဘူးတဲ့... ထို့အတူသာပါပဲ ခန္ဓာငါးပါးကို အစွဲပြုလို့သာ "ငါ" ဖြစ်တယ်လို့ ယူပြီး ပပဉ္စတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်ရပါတယ်... အစွဲမပြုဘူးဆို မဖြစ်ပေါ်ပါဘူး...
ဆက်ပြီးဟောတာကတော့ အနတ္တလက္ခဏာသုတ် သဘောသွားပါပဲ... ရုပ်ဟာမြဲသလား... မမြဲဘူးလား... မမြဲပါ အရှင်ဘုရား... ဝေဒနာဟာမြဲသလား... မမြဲဘူးလား... မမြဲပါ အရှင်ဘုရား... သညာဟာမြဲသလား... မမြဲဘူးလား... မမြဲပါ အရှင်ဘုရား... သင်္ခါရဟာမြဲသလား... မမြဲဘူးလား... မမြဲပါ အရှင်ဘုရား... ၀ိညာဏ်ဟာမြဲသလား... မမြဲဘူးလား... နောက်ဆုံး အရှင်အာနန္ဒာက မမြဲပါ အရှင်ဘုရား ဆိုပြီးသည်နောက် တရားထူးကို ထိုးထွင်းသိသွားပါတယ်...
14 May 10, 16:21
ကိုညီ: အလည်ရောက်ပါတယ်ဘုန်းဘုန်း။ ဘုန်းဘုန်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေဘုရား lknt: ဒကာလေး ကိုညီ ရေ... ကောင်းပါပြီ... စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ... 14 May 10, 13:36
တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ အရှင်ဘုရား ပြောတဲ့အတိုင်း သစ္စာသိအောင် တပည့်တော် ကြိုးစားပါမယ်ဘုရား... မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာက ၀င်ဝင်ပြီး ဖျက်နေတော့... သိထားတဲ့သစ္စာလေးကလည်း တခါတခါ ပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဘုရား.. တပည့်တော်ကို ဆုံးမမယ့်သူဆိုလို့ အရှင်ဘုရားပဲရှိပါတယ်... တပည့်တော်ကြိုးစားမှာပါဘုရား... အခုလို ဆုံးမတဲ့အတွက် အရှင်ဘုရားကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.. အရှင်ဘုရား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... lknt: မြတ်ဗုဒ္ဒ သိစေလိုတဲ့တရားတွေ သိအောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် တပည့်တော် ရေ... ဒါပေမဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာက ဖျက်တာမဟုတ်ဖူးလေ... သူရှိမှကောင်းတယ်... သူတော်ကောင်းတရား ၇-ပါးထဲမှာ မပါပေမဲ့ သူတို့ကလည်း ကောင်းတဲ့တရားတွေလေ... မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ အကျင့်ထဲမှာပါတယ် ဒါကြောင့်ဆက်ကျင့်ပါ... မေတ္တာဆိုတာဘယ်လို ကရုဏာဆိုတာဘယ်လို ဆိုတာတော့ ခွဲခြားနိုင်ရမယ်... များများလေ့လာပါ ကောင်းပါတယ်... နောက်ထပ် မုဒိတာနဲ့ ဥပေက္ခာလည်း ထပ်ကျင့်ပါ... အစစ်အမှန် သူတို့ ရှိလာပြီဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းပါတယ်... လောဘ ဒေါသ မာနတွေ နည်းသွားမယ်... ဒါပေမဲ့ တချို့က သူတော်ကောင်းတရားနဲ့နေကြရင် လူအတွေထင်ကြတယ်... ဒီတော့ ခုခေတ်က အလို့လဲ မဖြစ်ပြန်ဘူး... အ,ရင် နင်းကြပြန်ရော... အနင်း မခံရအောင်လည်းနေ... ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ မပျက်အောင်လည်းနေပါ... လမ်းကြောင်း ရှာတွေ့ပါစေ... မိသားစု စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ... 13 May 10, 15:37
တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ မင်းကုသနဲ့ပဘာဝတီ အကြောင်း အခုမှပဲ အစအဆုံး ဖတ်ဖူးတော့တယ် ဘုရား... ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပုံပြင်လို နားထောင်ဖူးပါတယ်... Happy Ending.. ဆိုတော့ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ :) lknt: တပည့်တော် ရေ... ဘုရားဇာတ်တော်တွေကို ပုံပြင်တွေလို ငယ်ငယ်က နားထောင်ခဲ့ဖူးပြီး အသိဉာဏ်တွေ ရသင့်သလောက် ရခဲ့ကြရပါတယ်... ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဇာတ်တော်တွေ မကွယ်ပအောင် ကျင့်စဉ်ကောင်းတွေ မပျောက်ပျက်အောင် လူငယ်တွေကို ပြောပြနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်... ပြည်ပမှာတော့ လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်က ဘာမှန်းမသိတော့ အတော်လေး အားနည်းပါတယ်... ဇာတ်တော်တွေ များများ နားထောင်ခဲ့ဖူးသူများဟာ ကြီးလာရင် လိမ်မာရေးခြား ရှိနိုင်ပါတယ်... တပည့်တော် ပြောသလိုပါပဲ... မင်းကုသနဲ့ ပပ၀တီ ဇာတ်တော်က ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းနိုင်တော့ တကယ့်ကို ပျော်စရာလေးပါ... ဒါပေမဲ့ သည်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ လမ်းဆုံးနိုင်အောင်... အလောင်းတော် ကုသမင်းမှာ ရှင်ဘုရင်ဘ၀ကနေ အိုးထိမ်းသည် ပန်းသည် ထမင်းချက်အဖြစ်နဲ့ကို မတန်မရာ နေထိုင်ပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစားခဲ့ရတယ်နော်... ပပ၀တီရဲ့ ဘီလူးလို့လည်း အစွပ်စွဲခံရသေး... နောက်ဆုံးတော့ ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလာဘ်လို့ပဲ ပြောရမလားပဲ... တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေ ရရှိဖို့ကတော့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်... ပပ၀တီရဖို့တောင် သည်လောက်ခက်ခဲတာ... သစ္စာကို သိဖို့ရာသာဆို အတော်မလွယ်... မလွယ်ပေမဲ့လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခ ငြိမ်းချင်သူများကတော့ သိအောင် ကြိုးစားနေရဦးမှာပါပဲ... တပည့်တော်လည်း မင်းကုသနဲ့ ပပ၀တီကို အားကျရင်းနဲ့ သူတို့ကဲ့သို့ သစ္စာလေးပါးသိအောင် ကြိုးစားသွားပါ... မိသားစုစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ... 11 May 10, 11:24
တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ သူတော်ကောင်းနဲ့သူယုတ်မာကို ဘယ်လို ခွဲခြားရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေတ္တာဂရုဏာထား၍ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အရှင်ဘုရားကို ကျေးဇူးအနန္တ တင်ရှိပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီအမေးဖြေလေးကို တခြားသူများလည်း ဖတ်လို့ ရအောင် တပည့်တော် PDF နဲ့စာအုပ်လေးလုပ်ပြီး ဓမ္မဒါန လုပ်ထားပါတယ် အရှင်ဘုရား.. အရှင်ဘုရားခွင့်ပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်... အရှင်ဘုရား ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ.... lknt: ကောင်းပါပြီ တပည့်တော် ရေ... ဓမ္မဒါန ပြုလိုတဲ့ စေတနာကို သာဓုခေါ်ပါတယ်... ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုပါတယ်... မိသားစု စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ... 10 May 10, 22:50
flowerpoem: ဘုန်း၂ မျှတပါရဲ့လား ဦးချကန်တော့ပါတယ် ဘုရား
lknt: ဒကာမကြီး flowerpoem ရေ... မျှတပါတယ်... မိသားစု စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ...9May 10, 13:55
တပည့်တော်: ရိုသေစွာဖြင့် ဦးချကန်တော့ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ သူတော်ကောင်းနဲ့ သူယုတ်မာကို ဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲဆိုတာ နည်းလေးများရှိရင် ပေးသနားတော်မူပါဘုရား။ တုံးလှချည်လား တပည့်တော်ရဲ့.... အဲဒီလောက်လေးတောင် ဉာဏ်မရှိဘူးလားလို့အရှင်ဘုရားပြောရင်လည်း တပည့်တော်ခံရမှာပါ.... ဒါပေမယ့် တခါတခါ သူယုတ်မာသူတော်ကောင်း ခွဲခြားလို့မရနိုင်အောင် ထိုသူယုတ်မာများဟာ အယောင်ဆောင် တော်ကြပါတယ်ဘုရား... lknt: တပည့်တော်ရေ... သူတော်ကောင်းနဲ့ သူယုတ်မာဟာ ခွဲခြားရ ခက်လှပါတယ်... တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ သိသာတယ်... သူယုတ်မာတလှည့် သူတော်ကောင်းတလှည့်လည်း ဖြစ်နေတတ်တယ်... မြတ်ဗုဒ္ဓ ဒေသနာမှာတော့ အပြည့်အစုံ ပြထားပါတယ်... မိမိတို့တစ်တွေက သိအောင်လုပ်ပြီး နှလုံးသွင်း မှန်ကြရင်တော့... အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်လာကြပါလိမ့်မယ်... တရားအမှန်သိဖို့က နှလုံးသွင်းတွေ မှန်ဖို့လိုပါတယ်... အမှန်သိပြီးနောက်... အားလုံးပေါ့ ဘုန်းကြီး အပါအ၀င် မိမိတို့သဏ္ဍန်မှာ သည်လိုအကျင့်ဆိုးတွေ မရှိအောင် ကြိုးစားကြရပါမယ်...
သူယုတ်နဲ့ တွေ့ရတဲ့သူတွေမှာ အရမ်းပူလောင်နေမယ် ထင်ပါတယ်...
သည့်ထက် သူယုတ်မာမှာ ပိုပူနေမှာပါလေ...
သူယုတ်မာထက် ယုတ်မာသူနဲ့သာ တွေ့ရရင်တော့ မလွယ်...
ကောလိတသုတ်မှာ... သူယုတ်မာတို့ရဲ့ အခြေခံသဘောကို သည်လို ဟောထားပါတယ်...
သူယုတ်မာသည် ပြုဖူးသော သူ့ကျေးဇူးကိုမသိ... ပြုဖူးသော သူ့ကျေးဇူးကို ထင်စွာပြု၍မသိ... ဤသို့ပြုဖူးသော သူ့ကျေးဇူးကိုမသိခြင်း... ပြုဖူးသော သူ့ကျေးဇူးကို ထင်စွာပြု၍ မသိခြင်းကို သူယုတ်မာတို့သည် ချီးမွမ်းကုန်၏... ယင်းတို့သည် သူယုတ်မာတို့၏ အခြေခံသဘောပေတည်းတဲ့...
ဘေးမှန်သမျှ သူမိုက် သူယုတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တယ်တဲ့... သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် ၃-မျိုး...
၁။ သူမိုက်သည် ကြောက်လန့်ခြင်း ဘေးနှင့် စပ်လျက် ရှိ၏...
၂။ သူမိုက်သည် မငြိမ်သက်ခြင်း 'ဥပဒ္ဒဝေါ' နှင့် စပ်လျက် ရှိ၏...
၃။ သူမိုက်သည် စိတ်ဆင်းရဲခြင်း 'ဥပသဂ္ဂ' နှင့် စပ်လျက် ရှိ၏...
လက္ခဏသုတ်မှာ... သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် ၃-မျိုးကတော့...
၁။ ကိုယ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းသော အကျင့် 'ကာယဒုစရိုက်' ရှိတယ်...
၂။ နှုတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းသော အကျင့် 'ဝစီဒုစရိုက်' ရှိတယ်...
၃။ စိတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းသော အကျင့် 'မနောဒုစရိုက်' ရှိတယ်တဲ့...
အစ္စယသုတ်မှာ သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် ၃-မျိုးကတော့...
၁။ မိမိအပြစ်ကို အပြစ်ရယ်လို့ မရှုဘူး...
၂။ မိမိအပြစ်ကို အပြစ်ရယ်လို့ ရှုသော်လည်း တရားအလျောက် မကုစားဘူး...
၃။ သူတစ်ပါးသည် အပြစ်ကိုဝန်ခံ၍ ပြောလာပါလျက် တရားအလျောက် မခံယူဘူးတဲ့...
အယောနိသောသုတ်မှာ သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် ၃-မျိုးကတော့...
၁။ မသင့်လျော်သော အကြောင်းအားဖြင့် အမေးပြဿနာကို ပြုတတ်၏...
၂။ မသင့်လျော်သော အကြောင်းအားဖြင့် အမေးပြဿနာကို ဖြေတတ်၏...
၃။ မှန်ကန်ကောင်းမွန်သော သူတစ်ပါးအဖြေကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကောင်းချီး မပေးတတ်ဘူးတဲ့...
ခတသုတ်မှာ သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် ၃-မျိုးကတော့...
မကောင်းသော ကာယ ၀စီ မနော ကံသုံးမျိုးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော မလိမ္မာသော မိုက်မဲသော သူယုတ်သည် ဂုဏ်ကို တူးဖြိုဖျက်ဆီးအပ်သော မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်၏၊ အပြစ်ရှိသူလည်း ဖြစ်၏၊ ပညာရှိတို့ စွပ်စွဲထိုက်သူလည်း ဖြစ်၏၊ များစွာသော မကောင်းမှုကိုလည်း ဖြစ်ပွါးစေ၏တဲ့...
မလသုတ်မှာ သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် ၃-မျိုးကတော့...
၁။ သီလမရှိသူလည်း ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် သီလမရှိခြင်း ဟူသော အညစ်အကြေးကိုလည်း မပယ်...
၂။ ငြူစူတတ်သူလည်း ဖြစ်၏၊ ထိုသူသည် ငြူစူခြင်း ဟူသော အညစ်အကြေးကိုလည်း မပယ်...
၃။ ဝန်တိုတတ်သူလည်း ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် ဝန်တိုခြင်း ဟူသော အညစ်အကြေးကိုလည်း မပယ်ဘူးတဲ့...
ဝသလသုတ်တော်မှ သူယုတ် သူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း သိရန် အမျိုး ၂၀ ကတော့...
၁။ အမျက်ကြီးသူ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့သူ၊ သူတပါးဂုဏ်ကျေးဇူးကို ခြေဖျက်သူ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူ ရှိသူ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူသို့ ကူးပြောင်းသူနှင့် မိမိအပြစ်ဖုံးလွှမ်း၍ လှည့်စားတတ်သူတို့သည် သူယုတ်မာ ဖြစ်၏။
၂ဝ။ ရဟန္တာ မဟုတ်ပါဘဲလျက် ရဟန္တာဟု ဝန်ခံသူသည် လောက၌ အယုတ်မာ ဆုံးဖြစ်၏တဲ့ တပည့်တော်ရဲ့...
နောက်ထပ် သူယုတ်မာအောက် ယုတ်မာသူဆိုတာ ရှိသေးပါတယ်...
အဋ္ဌင်္ဂိကသုတ်မှာဟောကြားထားတာပါ... သူကတော့ ၈-မျိုးရှိတယ်...
၁။ မိမိလည်း မှားသော အယူရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော အယူ၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၂။ မိမိလည်း မှားသော အကြံရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော အကြံ၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၃။ မိမိလည်း မှားသော စကားရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော စကား၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၄။ မိမိလည်း မှားသော အလုပ်ရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသောအလုပ်၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၅။ မိမိလည်း မှားသော အသက်မွေးမှု ရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော အသက်မွေးမှု၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၆။ မိမိလည်း မှားသော အားထုတ်မှု ရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော အားထုတ်မှု၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၇။ မိမိလည်း မှားသော အောက်မေ့မှု ရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော အောက်မေ့မှု၌ ဆောက်တည်စေ၏။
၈။ မိမိလည်း မှားသော တည်ကြည်မှု ရှိ၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မှားသော တည်ကြည်မှု၌ ဆောက်တည်စေ၏။
မိမိလည်း အမှားတွေလုပ် သူတစ်ပါးကိုလည်း အမှားတွေ လုပ်စေသူ... ဤသူကို သူယုတ်မာအောက် ယုတ်မာသူ ဟု ဆိုအပ်၏တဲ့ တပည့်တော်...
နောက်ဆုံး ချုပ်ရင်တော့ မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကံ သုံးပါးနှင့် ပြုမူသူကို သူယုတ်မာလို့ သတ်မှတ်ရတော့မှာပါ... ပညာရှိတွေကလည်း ကဲ့ရဲ့ပါတယ်... မိမိမှာလည်း မရှိအောင်ကျင့်ပြီး... မိမိနားမှာ သူယုတ်မာရှိနေရင်လည်း... ကဲ့ရဲ့ပါ အပြစ်ပြပါ သွန်သင်ပါ ဆုံးမပါ... ဒါဟာ သတ္တ၀ါအများ ကောင်းစားရေးအတွက် ပြုလုပ်ကြရမဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဒရဲ့လမ်းစဉ်ပါပဲ... အပြစ်ပြ သွန်သင် ဆုံးမလို့မှ မရခဲ့တော့ဘူး ဆိုရင်တော့... လစ်လျူရှု ဥပေက္ခာပြုရတော့မှာပါပဲ... မြတ်ဗုဒ္ဓ အသုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ ဗြဟ္မာဒဏ်ပေါ့... မပြောဆိုတော့ဘူး မဆက်ဆံတော့ဘူး အဆက်အသွယ် လုံးဝ ဖြတ်တောက်ပလိုက်တော့တာပါပဲ...
၀ိနည်းတော်တွေထဲမှာတော့ စည်းကမ်းဖေါက်တဲ့ ရဟန်းတွေကို ရဟန်းယုတ်လို့ သုံးတာတွေ တွေ့ရပြန်ပါတယ်... ၀ိနည်း အကြီးလေးပါးက လွဲရင်တော့ ကျန်တာတွေ ဒေသနာကြား အာပတ်ဖြေ ကုစားရင် အပြစ်မရှိတော့ဘူးလို့ ပြပါတယ်...
၁။ ဘုရားဥပဒေအရ ဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့ အပြစ်-အာပတ်...
၂။ လူလောကမှ သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြစ်... (ဥပဒေအရ)
၃။ လောကသဘာဝဓမ္မ အပြစ်... (အပါယ်ဒုက္ခဘေး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခဘေး)
သည်သုံးမျိုးမှာ အပြစ်မရှိတော့တာကတော့... နံပါတ် ၁ ဘုရားဥပဒေအရ ဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့အပြစ် မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်... ဒေသနာကြားပြီးတဲ့ ရဟန်းကို ဘုရားဥပဒေအရ ရဟန်းယုတ်လို့တော့ ခေါ်မရတော့ဘူးပေါ့... ဒါပေမဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့ နံပါတ် ၂-၃ အပြစ်တွေကတော့ ရှိနေပါသေးတယ်... လူတွေအတွက်ကတော့ နံပါတ် ၂-၃ အပြစ်တွေရှိနေပါတယ်... သည်အပြစ်တွေ ရှိနေလို့ သူယုတ်လို့ ဆက်ခေါ်မယ်ဆို ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်... တကယ်လို့ လူဖြစ်စေ ရဟန်းဖြစ်စေ သည်အမှုကို မှားမှန်းသိလို့ နောင်တရ... ဆက်လက်ပြီး မလုပ်ကိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့... သူယုတ်လို့ ဆက်ပြီး မခေါ်သင့်တော့ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်... အပြစ်ကတော့ မိမိပြုတဲ့ကံအတိုင်း လာကြမှာပါ... ကံတူအကျိုးပေး... တူသောအကျိုးတွေ သူ့ကိုပေးပါလိမ့်မယ်... မိမိက မကောင်းတဲ့ ကံအသစ်တွေ မယူမိဖို့တော့ လိုပါတယ်...
ခုဆက်ရေးပေးမှာကတော့ ယုတ်မာသောသူတို့၏ အမှတ်အသား ၁၈-မျိုးလို့ ဇာတ်တော်မှာ ပြပါတယ်...
၁။ ခြေဖဝါးပြန့်ကျယ်လှခြင်း၊ (ဗလင်္ကပါဒ)
၃။ လျောကျသောအသားစိုင်ရှိခြင်း၊ (သြဝဒ္ဓပိဏ္ဍိက)
၈။ ဝမ်းဗိုက်ကြီးခြင်း၊ (ကုမ္ဘောဒရ)
၁ဝ။ မျက်စိစွေစောင်းခြင်း၊ (ဝိသမစက္ခုက)
၁၂။ ဆံပင်အဝါရောင်ရှိခြင်း၊ (ဟိရိတကေသ)
၁၃။ တွန့်သောအရေရှိခြင်း၊ (ဝလီန)
၁၆။ ခါး ကျောက်ကုန်း ပခုံးတို့၌ ကောက်ကွေးနေခြင်း၊ (ဝိနတ)
၁၇။ သွားလာသောအခါ အဆစ်များမှမည်ခြင်း၊ (ဝိကဋ)
၁၈။ အရပ်ရှည်လွန်းခြင်း၊ (ဗြဟာ) ဇာတက၊ ပါ၊ ဒု၊ စာ-၃၅၁။
သူယုတ်မာဖြစ်ကြောင်းတွေ ရေးပြထားပြီဆိုတော့ သူတော်ကောင်းကတော့ သူတို့နဲ့အပြန် ကျင့်ကြသူပေါ့ တပည့်တော်ရယ်...
ရေးတာတွေလည်း ရှည်သွားပြီမို့ နားပါတော့မယ်...
လိုရင်းရောက်လို့ အနှစ်တရားတွေ ရှာဖွေ တွေ့ရှိကြပါစေ...
အားလုံးပဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်းခွင့်လွှတ်ပြီး သူတော်ကောင်းတရားတွေ ကိုယ်စီထားနိုင်ကြပါစေ...
9 May 10, 02:15
rjukoaung: အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သိချင်တာလေး ရှိနေပါတယ်ဘုရား အဲဒါဂရုဏာရှေ့ထားပြီ ဖြေကြားပေးပါရန် တောင်ပန်လှေ&#